हिजो नयाा ठिमीबाट च्यामासिंह जान भक्तपुर काठमाडांै नगर बसको यात्रा गर्ने अवसर मिलेको थियो। बस फराकिलो र खुला भएकोले आरामदायी महसुस भयो। तर विडम्बना, बसका सह चालकले यात्रुहरूसँग भाडा सङ्कलन गर्दा सल्लाघारीदेखि चढ्ने यात्रुसँग रु. १५ भाडा लिए। ती यात्रुले विरोध गरे तर कन्डक्टरले १५ नै लाग्ने ढिपी गरी उठाए।
सोही क्रममा मैले समितिले सेवाको उद्घाटन गर्ने बेलामा भक्तपुर नगरभित्र रु. १० मा यात्रा गराउने उल्लेख भएको र रेडियो तथा टीभी समाचारमा पनि आएको भन्दा पनि समितिको निर्णय नमान्ने जस्तो व्यवहार देखाए। तर यात्रुहरूको दबाबमा पछि सो बढी भाडा फिर्ता गरे। जहाँ केही यात्रुको विरोधको स्वरले गर्दा बढी भाडा फिर्ता दिन बस सहचालक बाध्य भए। सत्यको लागि सबैले बोल्नैपर्छ। गलत कुराको विरोध गर्नैपर्छ।
अब भर्खरै संविधानसभाबाट रुपान्तरित नेपालको व्यवस्थापिकाको अवधि समाप्त भयो। जनताको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू प्रस्तुत नै नगरी सांसदहरू घर गए। उक्त विधेयकहरू सदनमा व्यस्त कार्य तालिका भएर नभई सम्बन्धित दलका नेताहरूको दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थले उक्त विधेयकहरू पेश नगरिएको हालै प्रकाशित विभिन्न समाचारमा देखियो।
अब जनता नै राजनैतिक रुपमा शिक्षित भई सो विधेयकहरू अध्यादेशको रुपमा ल्याई जनतालाई सुलभ शिक्षाको हक प्रदान गराउन सम्बन्धित पक्षलाई दबाब दिनपर्ने देखिन्छ। जनताका छोराछारीलाई निजी विश्वविद्यालय तथा कलेजमा लाग्नेभन्दा आधा खर्चमा डाक्टर ईन्जिनियर शिक्षा प्रदान गर्ने प्रस्तावितसहितको ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक सदनको छलफलमा नल्याउनु ठूला राजनैतिक दलहरूको दलगत स्वार्थ र पक्षपात रहेको सत्य हो। अतः यसका लागि लाभान्वित पूर्वविद्यार्थी तथा प्राध्यापक समूहसहित समाजवादउन्मुख संविधानको समर्थकहरूले सम्बन्धित निकायलाई दबाब दिनपर्ने देखिन्छ।
भक्तपुरे रामभाइ, तचपाल